Bejing oo laga mamnuucay sigaar cabidda - BBC Somali
Bejing oo laga mamnuucay sigaar cabidda
1 Juunyo 2015
Xukuumada Shiinaha ayaa ka bilowday magaaladda caasumadda ah ee Bejing olole lagu mamnuucayo in sigaar lagu cabo magaaladda.
Boorar waaweyn ayaa la suray meelo badan oo ka mid ah magaaladda, waxaa sidoo kale la shaqaaleeyay kumanyaal kormeerayaal ah si ay u meel mariyaan xeerarka cusub ee ka dhan ah sigaar cabidda.
Hase ahaatee, dad qaar ee ku nool magaaladda Bejing ayaa u muuqada in aysan la soconba xeeerarkan cusub oo ay xukuumaddu soo rogtay oo looga mamnuucay sigaarka goobaha dadka isugu yimaadaan iyo xitaa qeybo ka mid ah banaanka.
Maanta oo Isniin ah oo ay ugu horeysay in uu dhaqan galino mamnuuciyada sigaarku ayaa dadka qaar ka mid ah waxay sigaar ku dhex cabayaan maqaayadaha. Qaar kale waxay sheegeen in aysan maqal in xeerarkan cusub ee sigaarka lagu mamnuucay.